बैंकबाट निकालिएका एक हजारका एउटै नम्बरका तीन नोट - Everest Dainik - News from Nepal
बैंकबाट निकालिएका एक हजारका एउटै नम्बरका तीन नोट
महोत्तरी, फागुन ४। महोत्तरीको गौशालामा एक बैंकबाट निकालिएको एउटै नम्बरका तीनवटा एक हजारका नोट भेटिएका छन् । बैकबाटै यस्तो त्रुटिपूर्ण नोट फेला पर्नाले सर्वसाधारण चकित परेका छन् ।
स्थानीय सहयोगी विकास बैंकबाट सेवाग्राहीले मंगलबार निकालेको १ लाख बराबरको हजार दरको बन्डलमा तीन वटा नोट एउटै नम्बरको फेला परेको हो ।
याे पनि पढ्नुस एकल पुरुषलाई पनि अब मासिक भत्ता !
राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडाको हस्ताक्षर रहेका ती नोट मङ्गलबार एक सेवाग्राहीले बैकबाट पैसा निकाल्दा फेला परेको हो । ङ १६ ५९२९०६ नम्बरका तीे नोट फेला परेपछि यहाँका जनता चकित भएका छन् ।
फेला परेका ती नोटमाथि अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस हाकिमको २० % तलब काटिन्छ, तर जवानको भने २८ प्रतिशत !
ट्याग्स: fake money, money